Sesipholisanjini "Lidea": intengo, ukubuyekezwa
Isitshalo "Lidselmash" oveza radiators steel "Lidea", lakhiwa ngo-1901. Khishiwe Ukushisa yabo amadivayisi high kanye ngemali ephansi, ngakho babekwazi bahlonishwe emazweni amaningi post-Soviet, ngisho emazweni abanye angaphandle.
Izici "Lidea" ibhethri
Ukuze kukhiqizwe amabhethri esetshenziswa kuphela imishini, ngakho-ke zonke izinyathelo ekwakheni elibukhali ngokucophelela ukuze bagweme iphutha kancane. Imiphumela iba yinhlanganisela yokukhandleka umkhiqizo osezingeni eliphezulu.
Sesipholisanjini "Lidea 'kubonakaliswa kanjani ngokuphelele yena kokubili amakhaya futhi izakhiwo enkulu yezimboni. Abaklami ekudaleni heater anjalo acabangele izifiso abaklami, ngakho kahle zingene ngaphakathi eziningi. Uma ukuziphatha izibalo ukuqhathanisa, kurediyetha "Lidea" ngaphambi izinhlobo eziningi amabhethri ngenxa Thrift, ngoba heats kunalokho ngokushesha inombolo encane ukushisa wachitha.
Ukufakwa zinsizakuphila ingenza ngisho nomuntu ongenalwazi kuleli cala, usebenzisa imiyalelo. Ngaphezu kwalokho, kurediyetha ilula ngempela ukuhlanza. Design Its kuhlanganisa grille, okulula ukususa yokuhlanza kanye njengenhlangano isethi aphansi emuva.
Izinhlobo "Lidea" amabhethri kanye izingxenye zawo
Yiziphi "Lidea" amadivayisi? Panel radiators ayatholakala izinhlobo ezimbili futhi ngezindlela ezahlukene zokuxhuma.
"Lidea-CD" ifakwe 4 uxhumano amashubhu uxhumano lateral. Kulesi ibhethri kuyahluka ngokucacile panel esemuva kusukela ngaphambili, okuyinto ebaluleke ngesikhathi inhlangano. Ngaphambili okuyingxenye njalo iqondiswe ekamelweni. Ngokuqondene emuva, kukhona ke hook ekhethekile, okuzokwenza ekugcineni okwesikhashana idivayisi.
"Lidea wagon" has ezine lateral tube yokuxhuma, amashubhu ephansi 2 kanye engenhla ohlangothini ingxenye ukukhwezwa valve umqondo lokushisa. Nge izakhi eyengeziwe kanye wesimethri ephelele kurediyetha ungakwazi azosethwa kusuka kokubili ohlangothini phambi futhi emuva noma node okuhlangana kuyo. Sesipholisanjini "Lidea wagon" unekhono baxhumane phansi inhlangano H emise. Ngakho, kuyokunikeza ithuba uyonquma amanzi ukwenza Ukudilizwa ibhethri uma kunesidingo.
Ububanzi zombili izinhlobo Ukushisa amadivayisi zihlanganisa:
2 (3) se-ubakaki;
4 (6) ipuleti plastic;
4 (6) isikulufo;
4 (6) amahange;
Isakhi esiyinhloko kuba iphaneli ibhethri, imbuthuma ukushisa. Ngaphezu kwalokho, ngenxa metal eqinile futhi enamathela multilayer of koqweqwe lwawo heater umelana umthwalo omkhulu futhi uzinze ukugqwala ukumelana. Yonke inqubo Welding Kwenziwa ngaphandle ngezandla, abasebenzi kuphela ukuthi azikho ukwehluleka, ngakho azikho amaphutha ukuklanywa akukwazi.
Ngakho, usuthathe isinqumo ukuthenga radiators "Lidea". Intengo kangakanani kuncike ekutheni nobude komkhiqizo. Ngokwesilinganiso, ke ububanzi ruble 1.5 kuya kwezingu-17.
Yonke imikhiqizo eseziqediwe licwebile ngaphansi kwengcindezi okusezingeni eliphezulu, kanjalo umenzi, ngaphandle kokwesaba, inika isiqinisekiso iminyaka 5. Ngokuyinhloko kurediyetha "Lidea" 1 noma 2 kanye nenombolo efanayo iphaneli convectors noma untula yalo.
Kukhona ezinye izinhlobo "Lidea» Amabhethri:
Model №10. 1 siqukethe panel, ngaphandle convector grids izindonga, kanye zedivayisi ukujula 47 mm.
Model №11. Isakhiwo kuhlanganisa panel 1, 1 convector grids ngaphandle izindonga. I zedivayisi ukujula - 47 mm.
Model №20. It is ehlanganisa 2 panel, kodwa ngaphandle convector. Kuziwa Izinsimbi nodonga. Irediyetha ukujula - 84 mm.
Model №21. It has panel ezimbili futhi convector 1, kanye Izinsimbi, nogange. Ibhethri Ukujula - 84 mm.
Model №22. Kubandakanya 2 panel 2 futhi convector, ngaphezu, wathi eheleni nodonga. Ukujula Kudivayisi - 102 mm.
Model №30. Siqukethe 3 panel, kodwa ngaphandle convectors. Kuziwa grate futhi udonga, futhi ukujula mkhiqizo 153 mm.
Model №33. Isakhiwo ine 2 panel kanye 2 convectors. Ngaphezu kwalokho, i-ngehele, nogange. Ukujula Kudivayisi - 102 mm.
"Lidea" niqinile radiators zinezimfanelo eminingi emihle, kungani ezidume ngakho.
Irediyetha lishisa, kuthatha ukushisa ingasaphathwa nesikhathi.
inhlangano Ikhwalithi kuvimbela ukuvuza uketshezi. Ngaphezu kwalokho, enamathela powder ebhethrini nakanjani ayinangozi.
Ibhethri kulula ukuhlanza, izindonga side futhi yegridi Kulula kakhulu ukususa.
Aesthetically ukubukeka okuthokozisa kuyavumelana Interiors kakhulu.
Lolu hlobo kurediyetha kufanelekile zonke izinhlobo bafudumale izinhlelo.
Ukuntula e umkhiqizo owodwa nje. It kungokwalabo amabhethri ukufakwa eliphezulu liphumele izakhiwo. Kungaba nzima ukwenza ngenxa yokucindezela elincane ukusebenza 6-10 eziphindwe kurediyetha uthuthumele wokubacindezela e multi-storey izakhiwo. Cottages Awekho izinkinga ezinjalo, kodwa ngokuvamile, plus eziningi imikhiqizo ukuze bahlanganise le yokusilela, okuyinto ivelakancane.
Radiators "Lidea": Izibuyekezo ikhasimende
Nakuba Ukushisa amadivayisi yalesi brand unobuthakathaka yayo, kodwa ngentengo ephansi futhi eziningi izinzuzo uvumele radiators ukuba "Lidea" zithandwa kakhulu. Lokhu kufakazelwa omuhle nokubuyekeza amakhasimende.
Abantu abaningi bazama ukuthatha nozakwabo bakwamanye amazwe heater nabamesabayo ubheke imikhiqizo okuyinto akhiqizwa ezweni elaliyiSoviet Union. Kodwa ibhethri "Lidea" ngokuphindiwe wazibonakalisa izinga yabo ngenani lentengo elikahle. Yingakho amakhasimende ngokuvamile bhala indlela ziyathokoza ukuthi ezinhle ukulondolozwa futhi wathola ezifana imiphumela emihle kakhulu.
Ngaphezu kwalokho, ezimweni ezingajwayelekile, kwakukhona imibono engakhi mayelana ukuvuza nopende uyaxebuka, kodwa le nkinga iye yasiza sesiqinisekiso esikhishwe umenzi. Zonke izisulu enikeziwe uma kungenziwanga noma sekudlule iminyaka engu-5, imikhiqizo zishintshile kuya heater entsha. Kuyaphawuleka ukuthi nge isevisi yesiqinisekiso radiators "Lidea" izinkinga, njengoba umthetho, asivelanga.
Nakuba amazwana ebhaliwe - emihle noma emibi, bonke abathengi ukuncoma saziso ukuhlola ipasipoti umkhiqizo futhi zidinga isiqinisekiso. Kulokhu, ungakwazi ungesabi bakhohliswe futhi uthenge ngokuphepha imikhiqizo inkampani "Lidea".
Eminye imithombo yamandla kanye nokusebenza kwayo
Umusi zokuhlanza ekhaya, yasendlini - indlela ukukhetha imodeli kakhulu? Top 10 engcono umusi zokuhlanza
Indlela yokwenza cindezela ukuze amagilebhisi ngezandla zabo?
Indlela usebenza kahle Bulgarian: igxathu negxathu Umhlahlandlela
Air conditioning akufakwanga - isizathu. Akufakiwe conditioner compressor
Uphethiloli Huter: lapho bangakwazi singaba usizo kabi?
Bath nge Veranda kanye Loft
Rest in eCrimea: Yalta guest house. Izithombe kanye nokubuyekeza
"Planet Engokwemvelo ': Izibuyekezo insiza for ukunakekela umzimba
"Oblomov futhi Stolz" - indaba noveli IA Goncharov "Oblomov"
Hluboká Castle: umlando nesithombe
Imiyalelo indlela yokunakekela amahhashi: Amathiphu Izimfihlo
Indlela yokutshala ngelakho ibhotela amakhowe (izingono)?